NUGEN Audio သည် VisLM-H2 အသံကျယ်မီတာ၏ DSP အသစ်ဗားရှင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » NUGEN အသံ VisLM-H2 အသံကျယ်မီတာ၏နယူး DSP ဗားရှင်းဦးလွတ်မြောက်
NUGEN အသံ VisLM-H2 အသံကျယ်မီတာ၏နယူး DSP ဗားရှင်းဦးလွတ်မြောက်
Leeds, ဗြိတိန် - စက်တင်ဘာ 30, 2015 - NUGEN အသံယနေ့အသုံးပြုသူများကိုပစ်မှတ်ထား၎င်း၏စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင် VisLM-H2 အမြင်အာရုံအသံကျယ်မီတာများအတွက်အသစ်တစ်ခုကို DSP option ကိုမိတ်ဆက် လွန်စွာလိုလားသော Pro ကို Tools များ HDX စနစ်များကို။ အဆင့်မြင့် AAX DSP မျိုးစပ်နည်းပညာကိုပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းများ, VisLM-H2 DSP ဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်သို့ချောမွေ့စွာပေါင်းစပ် လွန်စွာလိုလားသော HDX ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အကောင်းဆုံးအသုံးချ လွန်စွာလိုလားသော အဆိုပါ Pro ကို Tools များအာဏာကိုအသုံးပြုသူများအတွက်အသံအင်ဂျင်အရင်းအမြစ်များကို။
ISL2DSP, HDX များအတွက် NUGEN အသံရဲ့စစ်မှန်တဲ့အထွတ်အထိပ် Limited လာရောက်ပူးပေါင်း, VisLM-H2 DSP အလွန် optimized HDX ပတ်ဝန်းကျင်၏ဆက်စပ်အတွင်း၎င်းတို့၏ NUGEN အသံကျယ်လောင် tools တွေကိုအပြည့်အဝစွမ်းဆောင်နိုင်မှု၏အားသာချက်ယူအသုံးပြုသူများအနိုင်ပါတယ်။
"VisLM-H2 DSP HDX စက်များအတွက်အသံကျယ်ပြုသောပူဇော်သက္ကာထဲကကျနော်တို့ရဲ့ lineup ပြီးဆုံး," Jon Schorah, ဖန်တီးမှုဒါရိုက်တာ NUGEN အသံကဆိုသည်။ "VisLM-H2 DSP နှင့်အတူ HDX အသုံးပြုသူများအလျင်မြန်ဆုံးနှင့်အထူးချွန်ဆုံးထုံးစံ၌၎င်းတို့၏စက်မှာအသံကျယ်ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်နှင့်၎င်းတို့၏ HDX စနစ်များကနေအမြင့်ဆုံးအကျိုးကျေးဇူးရရှိ။ "
တည်ဆဲ VisLM-H2 အသုံးပြုသူများကို $ 99 များအတွက် DSP ဗားရှင်း upgrade ခွင့်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သစ်ကိုအသုံးပြုသူများ VisLM-H2 နှင့် (အသီးသီး $2နှင့် $ 449 မှာယခုရရှိနိုင်ပါ) ကို VisLM-H549 DSP ဗားရှင်းအကြားကိုရွေးချယ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
NUGEN အသံဟာအသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ပတ်လည် upmixing နှင့်အဆုံးမှအဆုံးသို့အသံကျယ်စီမံခန့်ခွဲမှု, မီတာနဲ့ content ရှာမှီးခြင်းမှပလေးအောက်ကိုမှ ဖြတ်. ဆုံးမပဲ့ပြင်များအတွက် Post-ထုတ်လုပ်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အများဆုံးအဆင့်မြင့်ဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်။ အဆိုပါ NUGEN အသံဒီဇိုင်းအဖွဲ့၏အစစ်အမှန်ကမ္ဘာထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံကိုထင်ဟပ်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်, အချိန်ချွေတာစရိတ်များလျှော့ချသဖြင့်, ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်ထိန်းသိမ်းနေချိန်တွင်သူကပိုမိုလွယ်ကူ High-အရည်အသွေး, လိုက်နာအသံမကယ်မလွှတ်စေ။ NUGEN အသံရဲ့အသံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်ကိရိယာများ, အသံကျယ်မီတာ / mastering ရောစပ်နှင့်ခြေရာခံခြင်းကမ္ဘာ့အသံလွှင့်အတွက်ထိပ်တန်းအမည်များ, Post-ထုတ်လုပ်မှုနှင့်တေးဂီတထုတ်လုပ်မှုအားဖြင့်အသုံးပြုကြသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် www.nugenaudio.com.
Image ကို Link ကို: www.wallstcom.com/NUGEN/NUGEN_Audio_VisLM-H2_DSP_beauty_shot.png
Image ကိုစာတန်းထိုး: NUGEN အသံ VisLM-H2 DSP
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ DSP isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော NUGEN အသံ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2015-10-05
ယခင်: tOG-VR နဲ့ tOG-Vista က 88K အချိန်နှင့်တပြေးညီထုတ်လွှင့်ဂရစ်ဖစ်စနစ်များများအတွက် Aja Corvid4အပေါ် RT ကို Software များစံချိန်စံညွှန်းများ
နောက်တစ်ခု: 2015 Red Bull Air ကိုလူမျိုးကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံရှစ်အဘို့အ Riedel MetroN်Signal ဖြန့်ဖြူး